Ita Mitengo uye Kuenzanisa Chati Senge Ninja | Martech Zone
Chitatu, October 23, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nezuro manheru ndakagadzira grid yemutengo pane nyowani plugin yatiri kuvhura iyo inotendeuka WordPress mune Email Kushambadzira chikuva, CircuPress. Zvaisave zvinonakidza zvachose kuvaka (ini ndaishandisa DreamCode yemahara emitengo uye yekufananidza gridhi samples) uye ivo vachiri kuda kuchinjwazve mberi kuti vaone kuti vanoteerera kune nharembozha uye piritsi skrini.
Kana iwe uchitsvaga iri nyore nzira yekuvaka kunze kwekuenzanisa matafura uye emitengo grid, tarisa Enzanisa Ninja uye Mutengo Ninja. Zvese zvipo zvinouya nemamwe akajairwa matemplate ayo anozokubatsira iwe kugogodza kunze kuvaka mamwe akanaka ma grid mumaminetsi.
Iri ibasa rakaitirwa, saka haunyatsogadzira gidhi uye kuteedzera / kunama kodhi yako. Iwe unoshandisa kodhi snippet iwe yaunonamira muHTML yako (kana tafura ID yakavharirwa mu WordPress shortcode kuburikidza nePlugin) kuratidza yako grid pane yako yaunoenda saiti.
Kubatsira kwe Enzanisa Ninja uye Mutengo Ninja ndiyo inomhanya iyo iwe yaunogona kuburitsa mamwe akanaka magidhi. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti pane zvipingamupinyi pane izvo zvaunogona kuisa kuburikidza newavo mushandisi interface. Pakupedzisira, ini handina kushandisa sevhisi nekuti ini ndaida kutevedzera palette pendi inoenderana nesaiti. Uye zvechokwadi, kana kukurumidza uye kugadzikana zviri zvakakosha, zvinoenderana nechetatu webhusaiti kuratidza yako zvemukati zvinogona kana kunge zvisiri chinhu chaunoshuvira kuita.
Tags: enzanisa ninjaenzanisa gridhikuenzanisa tafurapricer ninjamitengo gridtafura yemitengo